दल्नु भागहरु को पहनने कम गर्न, उच्च तापमान र जंग सुरक्षा प्रयोग मा सुरक्षा निकाल्ने प्रसारण तेल। सबै भन्दा राम्रो के छ र तिनीहरूलाई कस्तो भिन्नता छ? तरल पदार्थ स्नेहन को वर्गीकरण के हुन्? यस लेखमा हामी यो कुरा।
यांत्रिक घटक को प्रसारण मा स्नेहक को प्रयोगको माध्यमबाट जफती, अकाल वेयर र अन्य क्षति सुरक्षित छन्। यो एक बाक्लो फिलिम को गठन गरेर हासिल छ। साथै, यो तैयारी मा लोड र यसैले इन्जिन को हल्ला कम गर्छ। थप Lubricity तरल सम्पर्क सतहहरु देखि गर्मी हटाउने को समारोह पर्छ। तसर्थ, एकदम कम ऊर्जा हानि घर्षण मार्फत। प्रसारण लागि तेल साथै मोटर्स लागि विभिन्न वर्गीकरण को हो।
GOST अनुसार वर्गीकरण
प्रसारण स्नेहन तरल पदार्थ लागि त्यहाँ घरेलू GOST। चिपचिपाहट र प्रदर्शन आधारमा, तिनीहरूले पाँच समूह विभाजित छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै पद छ। उदाहरणका लागि, TM4-10 मतलब:
टीएम - प्रसारण तेल;
4 - ब्यान्ड सञ्चालन;
10 - चिपचिपाहट ग्रेड।
टीएम-1 - NIGROL गर्मी र जाडो तोकिएको जो एक समूह। हामी तेल को आसवन समयमा गठन थिए जो कच्चा अवशेषहरु बारेमा कुरा गर्दै छन्।
टीएम-2 - स्टीयरिंग तेल र पीपीसी को लागि एक समूह। तिनीहरूले कम गुणस्तर द्वारा विशेषता छन् र त्यसैले मात्र पुरानो घरेलू कार प्रयोग गरिएको।
टीएम-3 - जस्तै स्नेहक, जस्तै, चम्मच-10, चम्मच-15K। तिनीहरूले भारी कर्तव्य ट्रक सिलिण्डर, चोटीदार र कुंडलित-चोटीदार प्रकार को लागि प्रयोग गरिन्छ।
चम्मच-14gip, Tsgip र TSZ-9gip: टीएम-4 एक तेल गठन। उत्तरार्द्ध प्रकार जहाँ तापमान तल शून्य पचास डिग्री सम्म पुग्न सक्दैन Lorries, को लागि उत्तरी भागमा प्रयोग भएको छ। पहिलो प्रकार समशीतोष्ण क्षेत्र र तातो जलवायु मा प्रयोग गरिन्छ।
टीएम-5 - यो तेल TM5-12rk र TAD-17i। पहिलो प्रकार vsesezonki र दोस्रो रूपमा चिसो जलवायु लागि ट्रक लागि प्रयोग गरिन्छ - तातो र समशीतोष्ण जलवायु।
युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र हाम्रो देशमा, दुई वर्गीकरण फैलाउन: एसएई र एपीआई। तिनीहरूले आराम गर्दै छन् र प्रत्येक अन्य पूरक। एक चिपचिपाहट निर्धारण र अन्य therein निहित additives आधारमा फरक छ।
हुनत यो भिन्न यो वर्गीकरण, प्रसारण लागि मात्र तर पनि इन्जिन तेल लागि अवस्थित छैन। थप विवरण दुवै प्रकारका विचार गर्नुहोस्।
यो वर्गीकरण ईन्जिनियर को अमेरिकी समाज विकास भएको थियो। यसलाई मा स्नेहन तरल पदार्थ चिपचिपाहट आधारमा प्रकार विभाजन गरिएको छ। यो वर्गीकरण सबै ज्ञात छ, र किनभने सबैभन्दा कार निर्माता दर ध्यान सिफारिस गर्छौँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ चिपचिपाहट को, तेल प्रसारण।
वाहन द्वारा संचालित गरिनेछ जो तापमान, को आधार मा के राम्रो हल। त्यसैले, उच्च र कम तापमान लागि छुट प्रकार।
कम तापमान मा चिपचिपाहट जसमा achieves एक सय पचास हजार CP Brookfield दर नाप्ने द्वारा गरीएको छ। त्यसपछि तापमान निश्चित छ। यो मूल्य बढ्यो गर्दा बेयरिंग असफल गर्न थाल्छन्। निस्सन्देह, प्रक्रिया पुल संरचना मा निर्भर गर्दछ। तर तिनीहरूलाई मा नकारात्मक असर पर्नेछ भन्ने तथ्यलाई, यो एक स्थापित तथ्य छ। त्यो किन यो यति कम तापमान सूचक मा सिफारिसहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
तापमान अक्सर तल शून्य तीस डिग्री पुग्यो भने, मार्गदर्शन गियरबक्सलाई उपयुक्त कृत्रिम तेल लागि चिन्ह लगाइएको भएको 75W-XX र पाँच हजार CP चिपचिपाहट सीमा।
उच्च-तापमान शिखर एक सय डिग्री मा निर्धारण गरिन्छ। तसर्थ, प्रसारण तत्व पतन गर्न सुरु हुनेछ, तिनीहरूले एक उच्च तापमान मा बीस घण्टा काम पनि भने।
यो वर्गीकरण कि आवश्यक प्रसारण तेल निर्धारण सबैभन्दा बहुमुखी छ। जीएल चिन्ह के राम्रो छ चयन गरिएको छ। सबै भन्दा साधारण हामी जीएल-4 र जीएल-5 छन्।
सिद्धान्त मा मेकानिक्स पनि प्रसारण तेल जीएल-1 र जीएल-2 प्राप्त लागि। तिनीहरूले सञ्चालनको कोमल र माध्यमिक मोड अन्तर्गत फिट, र दोस्रो embodiment additives समावेश गर्दछ। तर वृद्धि प्रयोग तिनीहरूले कृषि उपकरण लागि फेला परेन।
जीएल-4 र जीएल-5 विभिन्न अवस्थामा लागि विश्वव्यापी additives को पर्याप्त सेट छौं। मार्गदर्शन प्रसारण को उत्तरार्द्ध प्रकार अब उपयुक्त छ।
त्यहाँ अर्को वर्गीकरण Zahnadfabrik Friedichshafen उत्पादनहरु निर्माता छ। तपाईं राम्रो छ जो एक प्रसारण तेल खरिद यदि यो तेल उच्चतम गुणस्तर चिन्ह बुझाउँछ, तपाईँ अगाडि खडा छैन मामला छ। 15 आज यो गुण स्कोर धेरै लोकप्रिय बन्ने छ यो मामला मा अंकन ZF ते-एमएल 01 र ZF ते-एमएल देखि हुन सक्छ।
ZT ते-एमएल 01 तेल गैर-समिकरण चेकपइंट स्वामित्वको संकेत गर्छ।
ZT ते-एमएल 02 ट्रक र बसें लागि उपयुक्त छ।
ZT ते-एमएल 03 - टोक कन्वर्टर्स लागि;
ZT ते-एमएल 04 - अदालतहरुमा लागि।
ZT ते-एमएल 05 - को लागि ड्राइभ धुरों बन्द-सडक उपकरण।
ZT ते-एमएल 06 - ट्रयाक्टर लागि।
ZT ते-एमएल 07 - लागि क्रेन, बिजुली प्रणाली।
ZT ते-एमएल 08, 09 - स्टीयरिंग प्रणाली लागि।
ZT ते-एमएल 10 - यात्री कार।
ZT ते-एमएल 11 - यांत्रिक र स्वचालित प्रसारण लागि।
ZT ते-एमएल 12 - व्यावसायिक वाहनहरु र बसें पुल लागि।
ZT ते-एमएल 13, - नाटो को वाहनहरु को परिवहन लागि।
ZT ते-एमएल 14 - व्यावसायिक कार लागि स्वचालित प्रसारण लागि।
ZT ते-एमएल 15 - ब्रेक प्रणाली लागि विशेष परिवहन नाटो उपकरण।
खनिज, अर्ध-कृत्रिम र सिंथेटिक: प्रत्येक वर्ग फरक तेल-को आधार मा स्नेहक समावेश छ। पनि चिपचिपाहट र तरल पदार्थ स्नेहन को प्रकार को बदलिने डिग्री टैग:।
बीस देखि एक सय हजार किलोमिटर गर्न: र खनिज र अर्ध-कृत्रिम र सिंथेटिक गियर तेल लामो जीवन छ। दूरी को साथै संयन्त्र को सञ्चालन अवस्था चिल्लो र डिजाइन मा निर्भर गर्दछ। तेल परिवर्तन मात्र यसको प्रदर्शन मा एक सामाग्री परिवर्तन को घटना मा बाहिर छ।
स्थिर सञ्चालन त्यहाँ क्षरण को मुख्य कारण हो जो सडक, को धूलो को प्रवेश विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा हासिल छ। पनि कार्यक्षमता को संयन्त्र मा चिस्यान संग सम्पर्क मा पर्छ। तसर्थ, विधानसभा उत्कृष्ट छाप प्रदान गरिएको छ भने सबै घटक र जोइन्टहरूमा र परिचालन गुण उच्च तहमा लामो समय को लागि रहनेछ।
प्रसारण तेल 75W90
यो स्नेहन तरल पदार्थ एक multigrade वर्ग बुझाउँछ। तेल gelled र ungelled छन्। पूर्व एक विशेष additives छ, र दुई तथ्याङ्कले द्वारा नामित गर्दै छन्, र उत्तरार्द्ध यसको संरचना thickening मा समावेश गर्दैन र एक आंकडा नामित।
गियर तेल 75W90 gelled फारममा भन्छिन्। यसको सुविधा सञ्चालन तापमान मा नै चिपचिपाहट, तर कम स्नेहक मा पतली हुन्छ भन्ने छ।
75W90 मा गियर तेल यसलाई विभिन्न अपरेटिङ मोड मा संयन्त्र को दीर्घकालीन उचित सञ्चालन प्रदान उत्कृष्ट विशेषताहरु, छ देखि, एक उच्च मूल्य परंपरागत छ।
स्नेहन चालीस डिग्री सेल्सियसमा पर्याप्त कम तापमान withstands। उच्च तापमान धेरै सजिलै, तिनीहरूलाई, साथै अन्य प्रजाति द्वारा ओसारपसार छन्।
गियर तेल 80W90
यो विकल्प जो जाडो मतलब शीर्षक, मा डब्ल्यू पत्र शब्द "जाडो" छ, र अंग्रेजी मा। गियर तेल 80W90 जाडो खेल सम्बन्धित। यो चिसो जलवायु लागि पूर्ण, बस 85W90 रूपमा छ। यो तेल, अघिल्लो एक जस्तै, एक निलम्बित प्रजाति गर्न भन्छिन्। 80W90 तल शून्य बीस-छ डिग्री गर्न तापमान स्थानान्तरण गर्न पूर्णतया सक्षम छ।
प्रसारण तेल ZIC 75W90 उदाहरणको रूपमा विचार गर्नुहोस्। यो सबै भन्दा राम्रो कम तापमान तरलता को एक विशेषता द्वारा छ।
एपीआई जीएल-तेल अनुसार 4/5 द्वारा विशेषता छ।
फ्ल्याश पोइन्ट 230 डिग्री छ।
45 डिग्री सेल्सियस - बिन्दु पोख्नुहोस्।
तसर्थ, हामी यस प्रसारण तेल 75W90 (एक भन्दा बढी हजार rubles, कि यो लागत धेरै महंगा छ जो को मूल्य), एकाइ को एक उत्कृष्ट सञ्चालन प्रदान गर्नेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ, र प्रसारण नरमररुपले र सजिलै स्वीच हुनेछ। एकै समयमा उच्च प्रदर्शन समिकरण अकाल पहनने देखि प्रसारण रक्षा र समय को एक लामो अवधिमा एक उत्कृष्ट काम ग्यारेन्टी।
तर, हामी सही गियर तेल ZIC वा अर्को मोडेल चयन गर्न, तपाईँले पहिला निर्देश पुस्तिका ध्यान पर्छ कि भूल हुँदैन। आखिर, त्यहाँ जो लागि जीवनकालमा एक तेल परिवर्तन मा सबै उपलब्ध छैन वाहन छन्।
Porsche Boxster - न्यूनतम मुद्रा को लागि superupravlyaemy supercar
सजावट - यो के हो? कार मा मोल्डिंग
VAZ 1117 - "LADA Kalina" गाडी
उद्योग क्षेत्र: प्रकार, वर्गीकरण, व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था को मुख्य क्षेत्रहरु
लागूपदार्थ एलर्जी देखि मदत गर्छन्?
"सैमसंग" एउटा स्क्रिन कसरी बनाउने? यो विधि र निर्देशन
परमाणुको संरचना एक परमाणु ऊर्जा को स्तर। प्रोटोनहरू, न्यूट्रनहरू, विद्युत्हरू
एक एप्रन मा भान्सा लागि माटोको टाइल: सही सामाग्री कसरी छनोट गर्न?